ဂျိုးဇက်အီလက်ထရောနစ် | 2017 NAB ပြပွဲ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အဆိုပါ 2017 NAB Show မှာယောသပ်သည်အီလက်ထရောနစ်
အဆိုပါ 2017 NAB Show မှာယောသပ်သည်အီလက်ထရောနစ်
2017 NAB ပြရန် ႀကိဳတင္ၾကည့္
တုတ် Caddy စီးရီး
အဆိုပါ 2017 မှာ display ကိုတွင် NAB ပြရန် ENG, SNG နှင့်အခြားပြင်ပမှာထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ခရီးဆောင် fiber-optic signal ကို-ဝယ်ယူစနစ်များ (OB) application များ၏ယောသပ်သည်အီလက်ထရောနစ် '' တုတ် Caddy စီးရီးဖြစ်လိမ့်မည်။ တုတ် Caddies အစာရှောင်ခြင်း, အော်ပရေတာ-ချထား, Point-to-point signal ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ option ကိုဆက်ကပ်။ ကြမ်းတမ်းဝံပိုငှက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို အသုံးပြု. တည်ဆောက်တစ်ခုချင်းစီကိုတုတ် Caddy တစ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း, အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ကြမ်းတမ်း enviroments မှာအလုပ်လုပ်သတင်းနှင့်လယ်ပြင်သမားတွေအတွက်ရာသီဥတု-ခံနိုင်ရည်ဖိုင်ဘာဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအလယ်ပုံ Caddies ပေးထားသော application များအတွက်လိုအပ်သောအတိအကျ signal ကိုရေတွက်ပေးနီးပါးန့်အသတ်ပေါင်းစပ်ရောနှောနှင့်ကိုက်ညီနိုင်မရရှိနိုင်ထက်ပို 12 module တွေနှင့်အတူ, စိတ်တွင်စိတ်ကြိုက်နှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/JosephElectronics/JE_Tote-Caddie-Set.JPG
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: ယောသပ်သည်အီလက်ထရောနစ်တုတ် Caddies ၏သတ်မှတ်မည်
Caddy Transporter စီးရီး
အဆိုပါ 2017 မှာ NAB ပြရန်ယောသပ်သည်အီလက်ထရောနစ်ပု Caddy Transporter စီးရီး, ဝေးလံခေါင်သီ-ထုတ်လွှင့်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်စိတ်ကြိုက်ဖိုင်ဘာ Transporter caddies ၏သစ်တစ်ခုမိသားစုမိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Caddy Transporter စီးရီး / 18G ၏အချက်ပြ3အထိထောက်ပံ့ပေးHD/ SDI compressed လုပ်မထားတဲ့ဗွီဒီယိုကိုပေါင်းအသံ, အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေး, Analog စဗီဒီယို, genlock, MADI နှင့် Dante အခြား module တွေတစ်ရွေးချယ်ရေးတပ်ဆင်နိုင်လေးအပိုဆောင်း slot နှစ်ခု။ တစ်ခုချင်းစီကို Caddy Transporter တစ်ခုတည်းဖိုင်ဘာကျော်မျိုးစုံဗွီဒီယိုနဲ့အသံအချက်ပြပေးပို့ခြင်းများအတွက် plug-in များနှင့်-ကစားသည့်စနစ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ တစ်ဦး 5-ru setting ကို၌ကျိန်းဝပ်ခံရဖို့ built, ထိုစနစ်၏တဦးတည်းအဆုံးထိန်းချုပ်မှုခန်းထဲမှာအခြားယူနစ်မှအချက်ပြမှုများပို့ခြင်း, စတူဒီယိုထဲမှာတပ်စွဲထားသည်။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦးယောသပ်သည်အီလက်ထရောနစ်သီးသန့်အတွက်တစ်ဦးရှောင်ကွင်းရုပ်သံလိုင်းအသုံးပြုသူများသည်ဖြစ်စေဦးတည်ချက်အတွက်ပိုပြီး A / V ကိုဒေတာအချက်ပြကိုထည့်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/JosephElectronics/JE_Transport-Caddie_Front.JPG
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: ယောသပ်သည်အီလက်ထရောနစ် Fiber Caddy ပို့ဆောင်ရေးတပ်ဦးကြည့်ရန် WGBH အဘို့တည်ဆောက်
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/JosephElectronics/JE_Transport-Caddie_Back.JPG
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: WGBH အဘို့တည်ဆောက်ယောသပ်သည်အီလက်ထရောနစ် Fiber Caddy ပို့ဆောင်ရေးသို့ပြန်သွားရန်ကြည့်ရန်
DFT-JR Compact HD ဗီဒီယိုကိုပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်
အဆိုပါ 2017 မှဧည့်သည်များ NAB ပြရန် ယောသပ်သည်အီလက်ထရောနစ် '' DFT-JR, ပေးပို့ခြင်းများအတွက်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း, ကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးရှိစွာဖြေရှင်းချက်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ် HD ဖိုက်ဘာကျော်ကဗီဒီယို။ အဆိုပါ JFS ဒစ်ဂျစ်တယ် Fiber ပို့ဆောင်ရေး (DFT) စီးရီး၏အစိတ်အပိုင်းသည် DFT-JR / ယူနန်ပြည်နယ်, compressed လုပ်မထားတဲ့ 16G ၏လိုင်းများ3အထိထုတ်လွှင့်နိုင်ပါတယ်HDconfiguration များပေါ် မူတည်. / SDI တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကို Single-mode ကိုအမျှင်အပေါ်ဗီဒီယို, ။ မလိုအပ်တဲ့ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်အတူတစ် 1-ru ပန်ကာမပါဝင်း၌ကျိန်းဝပ်သည် DFT-JR 16 အချက်ပြမှုများအဖြစ်အများအပြားကိုင်တွယ်ရန်ရှစ် Two-ရုပ်သံလိုင်း module တွေအထိထောကျပံ့ပေးနိုငျသညျ။ အသုံးပြုသူများကိုအလွယ်တကူနောက်ဆုံးမိနစ်အပြောင်းအလဲများကိုလိုက်လျောညီထွေမှလယ်ပြင်၌အသီးအသီးနှစ်ရုပ်သံလိုင်း module တစ်ခု၏ညှနျကွားပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အဆိုပါ DFT-JR ကိုလည်းရှောင်ကွင်းရုပ်သံလိုင်း, ယောသပ်အီလက်ထရောနစ်ထံမှသာရရှိနိုင်ကာဆန်းသစ်အင်္ဂါရပ်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါရှောင်ကွင်းရုပ်သံလိုင်းကိုပိုမို Analog စဗီဒီယို, အသံဖိုင်, ဒါမှမဟုတ် RS ဒေတာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချက်ပြ add ငှါ၎င်း, Two-ဖိုင်ဘာဗားရှင်းနဲ့အသုံးပြုသူများကိုလည်း Gigabit Ethernet အချက်ပြမှုများကို add နိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်စေသည်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/JosephElectronics/JE_DFT-16-Set.JPG
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: ယောသပ်သည်အီလက်ထရောနစ် DFT-JR ၏သတ်မှတ်မည် HD ဗီဒီယိုကိုပို့ဆောင်ရေးယူနစ်
custom Fiber စုဝေးခွင့်နှင့်လက်မှတ်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်း
ယောသပ်သည်အီလက်ထရောနစ်ယင်းထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ထုံးစံဖိုင်ဘာအသင်းတော်များပေးအထူးပြု။ ယင်း Neutrik opticalCON- နှင့် Lemo SMPTE-certified ဖိုင်ဘာပညာရှင်များအလျင်အမြန်ကဲ့သို့သောပရီမီယံ cable ကိုထုတ်လုပ်သူများထံမှထုတ်ကုန်သုံးပြီးအသင်းတော်များနှင့် breakout ကြိုးတွေလီဆယ်နိုင်ပါတယ် Belden, Furukawa နှင့် OCC ။ ယောသပ်သည်အီလက်ထရောနစ်လည်းမသက်ဆိုင်ထုတ်လုပ်သူများ, မည်သည့်ချွတ်ယွင်းဖိုင်ဘာကေဘယ်လ်ပရိသသို့မဟုတ် breakout အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့အဆင်သင့်စက်ရုံတစ်ရုံ-လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုဖိုင်ဘာပြုပြင်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ယောသပ်သည်အီလက်ထရောနစ် '' ဖိုက်ဘာကျွမ်းကျင်သူတွေက 2017 မှာလက်ပေါ်ပါလိမ့်မည် NAB ပြရန် တဲ C6648 အတွက်ဖိုင်ဘာအသင်းတော်များနှင့်ပြုပြင်ရေးအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြပါသည်။
ယောသပ်သည်အီလက်ထရောနစ် (Je) 100 ဝန်ကြီးချုပ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အီလီနွိုက်ပြည်နယ်နှင့်ကာလီဖိုးနီးယားနှစ်ဦးစလုံးအတွက်စတော့ရှယ်ယာတည်နေရာနှင့်အတူလိုလားသူတစ်ဦးက / V ကိုအမှတ်တံဆိပ်, ထက်ပိုပြီးအဘို့အခွင့်ရ Stock ဖြန့်ချိသည်။ အဆိုပါ JFS အမှတ်တံဆိပ်လက်အောက်တွင် je ကိုလည်းဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်များနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများဆန်းသစ်ထုံးစံဖိုင်ဘာဖြေရှင်းချက် - ရောနှောထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် System Integration အဘို့ - ထိုကဲ့သို့သော Caddy စီးရီး, DFT စီးရီးများနှင့် 4K ဖိုင်ဘာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဂီယာအဖြစ်။ အပြည့်အဝထောက်ခံပညာရှင်များနှင့်အတူ staffed တစ် State-Of-The-Art ဖိုင်ဘာဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီး, je ဆို connector ကို, စုဝေး panel က, breakout, ဒါမှမဟုတ်အသုံးပြု interface ကိုယနေ့လီဆယ်အဆုံးသတ်ခြင်း, ဒါမှမဟုတ်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။ je ထက်ပို 65 နှစ်ပေါင်းများအတွက်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယား, နယူးယောက်, ကော်လိုရာဒို, ဂျော်ဂျီယာနှင့်လန်ဒန်မြို့ရှိကိုယ်စားလှယ်များရှိပါတယ်သိရသည်။ ယောသပ်သည်အီလက်ထရောနစ်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကမှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.josephelectronics.com.
တွစ်တာပေါ်မှာ Share: twitter.com/intent/[အီးမေးလျ protected]% 20Products% 20at% 20the% 202017%[အီးမေးလျ protected]% 20-% 20https: //goo.gl/qJKXr0
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 2017 NAB ပြရန် ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း Caddy Transporter စီးရီး custom Fiber စုဝေးခွင့်နှင့်လက်မှတ်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်း DFT-JR Compact HD ကိုဗီဒီယိုပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက် ယောသပ်သည်အီလက်ထရောနစ် NAB 2015 NAB 2016 NAB16 nabshow တုတ် Caddy စီးရီး ကုန်စည်ပြပွဲ 2017-02-28
ယခင်: Waze ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအပေါ်ရှိနိုင်အခုတော့ Skyward Kick Productions မှစ. နယူး 4K အကြောင်းအရာ
နောက်တစ်ခု: အဝိုင်းတွင် Entertainment ကပစအဖွဲ့သို့ Craig စျေးထည့်ပေးသည်